Zavakanto & Kolontsaina · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Jona, 2019
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Jona, 2019
Karaiba 22 Jona 2019
Nahatsapa ny fahaizan'ilay ekipa i Cedella, ilay zanaka vavin'i Bob Marley ka nitondra ny fanohanany, tamin'ny fandresena lahatra ilay mpanazatrany Hue Menzies mba hanolotra ny fanohanany. Ankehitriny, tonga any amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny baolina kitra vehivavin'ny FIFA 2019 izy ireo.
Azia Atsinanana 22 Jona 2019
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Jona 2019
Hetsi-panoherana am-pilaminana hafa nivadika ho korontana ny herinandron'ny 11 Aogositra...nitifitra mpanao fihetsiketsehana tamin'ny bala fingotra sy baomba mankarenina ireo miaramila Israeliana. Nitatitra ny International Solitary Movement hoe efatra ambinifolo ny olona naratra, nisy Israeliana iray mpikatroka mafana fo . Ny Bethlehem Bloggers no nahazo fampitam-baovao voalohany avy amin'ilay mafana fo Jenny Digi
Amerika Avaratra 16 Jona 2019
Teraka tamin'ny 1983, Soben Houn, izay hita teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny maha Oliravina Utah USA 2006 azy, nisolo tena ireo vondrom-piarahamonina Kambodziana-Amerikana ary Kambodza manontolo. Amin'ny maha-malaza azy, izy no hanome lanja ny fampianarana ambony ao anatin'izao vanim-potoana nomerika izao. Ary mikatsaka ny handray anjara amin'ny Oliravina USA 2006 izy amin'ny 21 aprily.
Azia Atsimo 04 Jona 2019